Igwe anaghị agba nchara dị nchara n'ụwa bụ naanị 0.015 mm: emere na China - China Foshan Hermes Steel
Igwe anaghị agba nchara dị nchara n'ụwa bụ naanị 0.015 mm: emere na China
Dị ka akụkọ CCTV kacha ọhụrụ si kwuo, "igwe anaghị agba nchara" nke China Baowu Taiyuan Iron and Steel Group mepụtara dị gịrịgịrị karịa akwụkwọ, yiri enyo, ma sie ike n'ụdị. Ọkpụrụkpụ bụ naanị 0.015 mm. Nchịkọta nke mpempe akwụkwọ nchara 7 bụ akwụkwọ akụkọ. ọkpụrụkpụ.
A na -akọ na nke a bụ igwe anaghị agba nchara dị nchara n'ụwa ugbu a, enwere ike iji ya dị ka ihe nhazi na mgbawa n'ọdịnihu, ya mere a na -akpọkwa ya "igwe mgbawa."
Iji mee ụdị "mgbawa nchara", isi ihe dị na nhazi na nchikota rollers breeki na ntụgharị. Baowu Taiyuan Iron and Steel Group emeela nnwale nnwale 711 wee nwalee ihe karịrị 40,000 ụdị rollers ruo afọ abụọ zuru ezu. Mgbe enwere ike ịhazigharị na njikọta, emere ọnụ ụzọ igwe anaghị agba nchara ka ọ bụrụ ọkpụrụkpụ 0.02 mm, na -emebi ikike nke teknụzụ mba ọzọ.
Malite na Mee afọ gara aga, Iron na Steel Taiyuan gara n'ihu na -eme nyocha sayensị na teknụzụ dabere na nke a, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị nnwale, o mechara gụchaa igwe anaghị agba nchara na 0.015 mm.
Na mgbakwunye na nhazi mgbawa, a nwekwara ike iji '' chip chip '' maka ihe mmetụta dị n'ọhịa aerospace, batrị maka ngwaahịa ume ọhụrụ, na ekwentị mkpanaka mpịachi ihu.
Oge ezipụ: Aug-30-2021